March 7, 2021 Xuseen 1
Guddoomiyaha barlamaanka Puntland, xildhibaanno kamid ah Golaha Wakiillada, Wasiiro ka tirsan Golaha Xukuumadda, Isimo, Maamulka Gobolka Sanaag, kan degmada Badhan, Shacab iyo masuuliyiin kale ayaa magaalada Badhan kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey AUN Marxuum Xildhibaan Cali Axmed Saalax (Cali Dhahar) oo ahaa Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiilladda.
Guddoomiyaha ayaa salaatul Jinnaasada iyo aaska kadib u duceeyey Marxuumka oo ahaa Mudane dalka & dadka usoo shaqeeyey, muddo dheerna ka mid ahaa Hawl-wadeenada Golaha Wakiillada DPL, haddana ahaa Xildhibaan iyo Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada & Dhaqank Golaha Wakiillada DPL.
“Waxaan maanta halkan ku aasnay Marxuum Xildhibaan Cali Axmed Dhahar, Alle naxariistii Janno ha siiyo innagana Samir iyo iimaan Alle ha inaga siiyo, nin Rabbi yaqaan oo caadil ah buu ahaa, si gaar ah waxaan uga tacsiyaynayaa Golaha Wakiillada, eheladiisa iyo guud ahaan bulshada Puntland ” Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Dawladda Puntland.
AUN Xildhibaan Cali Axmed Saalax oo kamid ahaa aasaasayaashii Puntland ayaa muddo dheer ka shaqaynayey xarunta golaha wakiilada kahor inta uusan dhammaadkii 2018 si rasmi ah uga mid noqon xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland.
Ali Ahmed Dhahar Allah ha u naxariisto. Amarka ilaahay marxuumkaas wejigiisa markaan arko waxaan dareemi jiray kalsooni waxaana ka muuqatay astaan howl karnimo iyo daacadnimo oo naadir ku ah dadka Soomaalida ah. Waxaan aad ula socday howlihii adkaa ee doorashooyinka Puntland iyo sidii nadiifta ahayd ee isaga iyo teamkiisu uga soo dhalaaleen howlihii loo igmaday
Puntland lost a great trail blazer😭😭😭😭